Tuesday, April 6, 2010 Sabtida, Juun 27, 2015 Matt Chandler
Dareenkaas calooshaada ku sii qulqulaya ayaa laga yaabaa inuu dhab ahaantii ka imanayo biraawsarkaaga. Ha eegin hadda, laakiin Google waxay qorsheyneysaa inay soo saarto qalab furaha u oggolaanaya dadka isticmaala inay ka baxaan la socoshada by Google Analytics.
Google, oo horseed u ah bixiyaha raadinta iyo hooyada ka dambeysa caanka ah taraafikada webka Google Analytics Analytics qalabka, ayaa u oggolaan doonta isticmaaleyaasha inay ka fogaadaan in lala socdo qalabkooda.
Tani waxay keeneysaa su'aalo dhowr ah iyo saameyno suurtagal ah oo loogu talagalay websaydhada websaydhada iyo kuwa ka ganacsada websaydhka isticmaala Google Analytics si ay ula socdaan taraafikada websaydhka, ugu horreyn sida isticmaalka qalabka loo yaqaan 'plugin' uu u saameyn doono ururinta xogta taraafikada goobta. Tani waxay weydineysaa su'aal kale oo muhiim ah oo macquul ah: muxuu Google sidan u sameyn lahaa markii Google Analytics uusan ururin xogta shakhsiyeed meesha ugu horeysa?
Waxyaabaha ugu horreeya ee ugu dambeeya, waxay kuxiran yihiin waxa la tixgelin karo shakhsiyeed xogta. Macluumaadkaaga ISP iyo goobta juqraafi ahaan ma lagu tiriyaa shaqsi ahaan? Google Analytics ma soo uruuriso cinwaanada IP-ga shaqsi ahaaneed, taasoo la micno ah in dhammaan macluumaadka la raad raaciyey ay yihiin gebi ahaanba magac la'aan.
Tani miyey Google gelineysaa qaybta wadarta munaafiqiinta maaddaama ay hayn karaan diiwaanka aan la cayimin ee taariikhda raadinta isticmaaleyaasha? Malaha. Taariikhda raadinta waxay u oggolaaneysaa Google inay soo gudbiso natiijooyinka raadinta shaqsiyadeed ee cajiibka ah, iyo intay fududeeyeen in laga baxo astaantan iyaga la mid ah Xarunta Aqoonsiga, si sax ah ugama baxaan jidkooda si ay u xayaysiiyaan suurtagalnimadaas. Waxa kale oo ay sheegaysaa in koox khaas ah ay ka codsadeen Guddiga Ganacsiga Federaalka furo baaritaan ku saabsan Google Buzz, sidaas darteed Google waxaa laga yaabaa inuu xoogaa yar ku dhufto xagga hore ee asturnaanta.
Buuqa ayaa ahaa mug iyo muuqaal sare leh, laakiin falcelintaydii ugu horreysay waxay ahayd Marka? Immisa qof ayaa xitaa ka warqaba inay leeyihiin Google Profile, iskaba daa inay wax ka beddeli karaan xogtan oo ay hagaajin karaan dejintooda gaarka ah iyo dookha xayeysiinta Ma awoodin inaan si dhakhso leh u helo wax xog ah oo xasaasi ah, laakiin waa maxay wadarta guud ee isticmaalayaasha websaydhka ah ee adeegsada qalabka loo yaqaan 'AdBlock Plus plugin' ee Firefox? Waxay u badan tahay inaysan ku filneyn in lagu dhejiyo meel ka baxsan leexashada caadiga ah.
Ujeeddadayda aasaasiga ahi waxay tahay in milkiileyaasha websaydhada iyo suuqleydyaashu, tallaabadani ay ka iibin karto macmiil badan Wax -qabad iyo WebTrends maaddaama kuweena daaha gadaashiisa ka rabaan ay helaan xogta ugu badan ee suurtogalka ah. Laakiin tallaabadaas waxay noqon kartaa falcelin jilib ah oo ku saabsan dhibaato aan wali dhicin – oo aan weligeed-jiri doonin.
Tags: AnalyticsftcAnalytics googlexoog -saaridjoojintamuuqaalwarbaahinta bulshada maantaVenturepadwebtrends
Matt waa Maareeyaha Mawduuca Dijital ah ee loogu talagalay Ingersoll Rand Technologies, oo waa bare ku xeel dheer Suuqgeynta Websaydhka ee Machadka Farshaxanka ee Indianapolis. In ka badan 10 sano ayuu khibrad u leeyahay abuurista istiraatiijiyad iyo maareynta waxyaabaha ku jira internetka ee ururada shirkadaha ay ka mid yihiin Weerar, Xarunta Caafimaadka NYU Langone iyo Shabakada Caafimaadka Bulshada. Waxa kale oo uu leeyahay rikoodh rikoodh ah oo vinyl ah iyo boog la yiraahdo George Benson.
Waa Kuma Dhageystayaashaada Dhabta ah?
Apr 6, 2010 at 9: 46 AM
Google Analytics wuxuu ku jiraa xaalad aan sugnayn. Dhinac keliya, iyagu waa kali-kali ah - oo bixiya xalka keliya ee isku-dhafan ee Adsense iyo Falanqaynta suuqa. Waa in lagu qasbaa inay la midoobaan adeeg bixiye falanqayn. Dhinaca kale, ma qaban karaan qaar ka mid ah isdhexgalka weyn (sida. Facebook Analytics by Webtrends) maxaa yeelay way tartamaan. Midkani wuxuu umuuqdaa mid carrab la ', in kastoo.
Apr 6, 2010 at 2: 06 PM
Waxaan rajeynayaa in Webtrends ay u maleyneyso inay taasi tahay waxa aad sameyneyso si aad u hesho hal gunno helluva.
Haa, Pat East oo ku taal Hanapin ayaa Twitter-ka ku soo qoray 'dhawaantan. Wave First, ka dibna Buzz, ka dib taakulaynta Caffiene, hadda kani?
Waxay u egtahay inay isku dayayaan inay ka ilaaliyaan helitaanka keli ahaantooda iyaga oo wax u dhimaya alaabtooda illaa kuwa kale ay qabsadaan.
Apr 6, 2010 at 4: 50 PM
Hagaag tani ma fiicna, ilaa ay haystaan ​​hab ay ku raad raacaan dadka isticmaalaya lambarka xanibaada. 🙂
Apr 6, 2010 at 5: 10 PM
Aragtidayada Mareykanka ee asturnaanta tani macno ma samaynayso, laakiin si Google Analytics ay ugu wanaagsanaato waddamada Yurub (kuwaas oo weydiinayay iibiyeyaasha falanqaynta nooca noocan ah ka-bixidda), Google waa hoggaamiye. Intaa waxaa sii dheer, isbeddelkani wuxuu u oggolaanayaa Google Analytics in loo isticmaalo goobaha dawladda (maadaama ay u hoggaansameyso tilmaamaha gobolka ee asturnaanta).
Ka fikir sida hoggaan ahaan si ka duwan sidii hore. Waxay saameyn ku leedahay suuqleyda, laakiin waxaan u maleynayaa waqti kadib, qawaaniinta dowladaha inay la wareegi doonaan iibiyeyaasha falanqaynta ee aan bixin wax la mid ah qaabkan ka bixitaanka.
Apr 7, 2010 at 2: 10 PM
Bar xiiso leh. Kama aanan fikirin suuqyada Yurub. Waad ku mahadsantahay aragtida.